5 Waxyaabood Oo Lagu Arkay Tababarkii Maanta Ee Liverpool & Arsenal Iyadoo Premier League Uu Soo Laabanayo Isbuucaan | Laacib.net
5 Waxyaabood Oo Lagu Arkay Tababarkii Maanta Ee Liverpool & Arsenal Iyadoo Premier League Uu Soo Laabanayo Isbuucaan
September 12, 2019 Balaleti Comments Off on 5 Waxyaabood Oo Lagu Arkay Tababarkii Maanta Ee Liverpool & Arsenal Iyadoo Premier League Uu Soo Laabanayo Isbuucaan
Horyaalka Premier League ayaa isbuucaan soo laabanaya ka dib kulamo caalami ah oo lagu maqnaa.
Kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa ciyaaraya isbuuc dhamaadka iyadoo Gunners ay garoonka Vicarage Road ku booqaneyso Watford halka Reds ay gurigeeda ku soo dhaweyneyso Newcastle.
Ciyaartoy badan oo kooxaha Arsenal iyo Liverpool ah ayaa ciyaaray kulamadii caalamiga, laakiin labada kooxood waxa ay u muuqdaan kuwa aan dhaawacyo ka qabin ka hor kulamada isbuuc dhamaadka.
Jariirada Daily Mirror ayaa maanta u kuurgashay tababarka labada kooxood ee London Colney iyo Melwood ka dhacay, waxayna ka qoreen warbixintaan oo ay ku eegayaan waxyaabihii lagu arkay tababarka maanta.
1. Kieran Tierney oo ku dhow taam ahaansho.
Saxiixa xagaaga ee Arsenal Kieran Tierney ayaan weli u ciyaarin Gunners sababo la xiriira dhaawac uu qabay, laakiin taasi dhawaan ayay isbedeli doontaa.
Inkastoo loo arko inay waqti dhow ku tahay kulanka Watford laakiin hadana waxa uu ku soo laabtay tababarka buuxa taasoo war wanaagsan u ah Gunners.
RIix Halkaan Si Aad U Akhriso: KASHIFAAD: Labo Xiddig Oo Real Madrid Ah Oo Ka Soo Muuqan Doona Shaxda Kooxda Adduunka Ee FIFA FIFPro World XI Iyagoo Aan Wax Koob Ah Qaadin
2. Bellerin ayaa isna ku soo laabtay tababarka Gunners
Kaliya daafaca bidix ma ahan waxa tababarka ku soo laabtay laakiin waxaa sidoo kale soo laabtay Hector Bellerin oo dhaawac ku maqnaa tan iyo bishii Janaayo, kaasoo la filayo inuu dib u helo booskiisa kooxda koowaad dhawaan.
3. Arsenal oo tijaabineysa shax ciyaareedka Liverpool
Madaama ay Arsenal soo iibsatay weeraryahan kale Nicolas Pepe xagaagii, tababare Unai Emery ayaa doonaya inuu seddexda weeraryahan isla soo safo hal mar.
Waxaa qorshihiisa uu yahay in sida Liverpool uu seddexda weeraryahan ka dib mariyo seddex khadka dhexe ah si weerarkooda iyo kubad difaacashadooda ay isagu dheelitirnaato.
4. Sepp van der Berg oo wax ka baranaya waayeelada
Liverpool ciyaartoy waa weyn lama aysan soo wareegin xagaagii, waxay keensadeen labo xiddig oo da’ yar. Mid waxay kala soo wareegeen Fulham waxaa lagu magacaabaa Harver Elliot, waxaana waqtigiisa Liverpool uu ka bixi waayay inuu raaligelin ka bixiyo afalagaado uu hadda ka hor baraha bulshada ugu geystay Harry Kane.
Mid kale waa Sepp van de Berg waa daafac dhexe oo aad loo qiimeeyo inkastoo uusan boos ka helin karin kooxda koowaad hadana waxa uu si joogta ah tababar u la qaadanayaa xiddigaha waa weyn ee Liverpool si uu wax uga kororsado.
5. Sawirka maanta oo Melwood laga qaaday
Sawirka maanta oo si weyn loogu wadaagayo baraha bulshada waxaa laga qaaday garoonka tababarka Liverpool iyadoo Andy Robertson uu ku maadeysanayo Mohamed Salah iyo sida uu jir ahaan u dhisan yahay.
Robertson ayaa u ciyaaray Scotland isbuucaan laakiin xulkiisa waxa ay guuldarro ka soo gaartay Belgium iyo Russia.